Ìhè Iron na-anabata onye isi agba Sam Daley na akwụkwọ akụkọ New York | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » Light Iron nabatara onye na-agba agba Sam Daley na akwụkwọ akụkọ New York
Onye na-agba agba agba agba agba agba ụkwụ na-eweta ọrụ nzọ ụkwụ na ahịa New York, zuru ụwa ọnụ site na imekọ ihe ọnụ.
Light Iron, ngalaba ọrụ ihe okike post-Production nke Panavision, anabatala agba Sam Sam Daley na ụlọ ọrụ ya na-eduzi akara nka. Daley sonyeere ndị otu ahụ dị ka onye agba agba agba agba agba ọrụ na ụlọ ọrụ New York nke ụlọ ọrụ ahụ, na-akwado ndị ahịa nwere atụmatụ na episodic.
Seth Hallen, onye nduzi ngalaba Iron Iron kwuru, sị, "Anyị nwere obi ụtọ ịnabata Sam na ezinụlọ Light Iron." “Kemgbe ọrụ ya, Sam azụlitewo mmekọrịta siri ike na gburugburu ụlọ ọrụ ahụ, ọkachasị na obodo New York. Ihe omuma na ochicho nke Sam maka mmekorita ihe na egosiputa na oru ya di egwu ma na usoro. Ebe e si nweta ya bụ nke abụọ na nke abụọ ma na-anọchite anya ọkwa nke ọrụ Light Iron mara maka. Ọbịbịa Sam na-egosipụta ntinye uche anyị na ahịa New York na ịkwado ndị ahịa anyị n'ebe niile na ịnweta ikike kacha mma. Anyị na-atụ anya ịmekwu ọkwa kwa afọ banyere akwụkwọ akụkọ anyị na-agbasawanye. ”
Daley na-eweta ihe karịrị afọ 20 na ahụmịhe na New York post-Production obodo, na-esonye Light Iron site na Companylọ Ọrụ 3. Mgbe ọmalitere na azụmaahịa azụmaahịa na DuArt, ọ mepụtara nka ya na Tape House na PostWorks tupu ọ banye Technicolor. N'ebe ahụ, ọ gụrụ dailies na ụfọdụ n'ime nnukwu ụlọ ọrụ New York n'oge ahụ. N'ịbụ onye ndị na-ese ihe nkiri nke ndị ya na ha mekọtara ọnụ dịka ndị na-agba agba na-agba ume, ọ gbanwere na agba ikpeazụ.
Oge mbu Daley rutara na ntinye ndi HBO Mildred Pierce na acclaimed njirimara indi Martha Marcy Nwere ike Marlene. Ihe ngosi telivishọn ya gụnyere usoro Smash, Girls, Deuce, Onye Ajọ na Agbanwe, na minista Ama m na nke a bụ eziokwu na Gosi m dike, nke ikpeazu nwetara ya HPA Award nomination na 2016. Njirimara njirimara ya gunyere Ihe oru Florida, Ndo maka ịmekpa gị ahụ na Beautifulbọchị mara mma na agbataobi.
"The Light Iron otu bụ incredibly collaborative na-atụ-eche echiche, na nke ahụ bụ otú m na-arụ ọrụ," Daley kwuru. Inyere ndị nduzi na ndị na-ese ihe nkiri ka ha gafee ebe a na-agbaru bụ ihe na-atọ m ụtọ. Ọrụ niile na ịhụnanya ha na-emefu na-arụpụta na ihu igwe n'ihu anyị. Ọ bụ akụkụ ọrụ m kacha baara m uru. ”
"Workingrụ ọrụ n'ime ezinụlọ Panavision bụ nnukwu ego nye m," Daley kwukwara. “Ọrụ mbụ m rụrụ n’ụlọ ọrụ ahụ bụ na ngalaba mgbazinye igwefoto dị ka ọrụ ịmụ ihe n’ụlọ akwụkwọ ihe nkiri. Ahụmahụ ahụ mere ka m nwee ike iso ndị na-ese ihe nkiri na-ekwurịta okwu nke ọma mgbe m rụrụ ọrụ na ụlọ nyocha n'oge mbụ ọrụ m. Ugbu a, imekọ ihe ọnụ nwere ike ịmalite na igwefoto prep! ”
Ndị omenkà Light Iron na-enye nkwado, imepụta ihe na ihe nkiri, usoro episodic na ọdịnaya mkpụmkpụ. Daley ga - agbakwunyere onye isi agba agba Sean Dunckley na New York, nwee ike iso ndị na - eme ihe nkiri na - arụ ọrụ n’ime ụwa niile. Ihe ndekọ nke bicoastal nke ụlọ ọrụ ndị na-acha agba agba ikpeazụ gụnyere Ian Vertovec, Jeremy Sawyer, Scott Klein, Corinne Bogdanowicz, Nick Hasson, Ethan Schwartz na Katie Jordan. Ndị ọrụ nka a so ndị na-eme ihe nkiri na-amalite na mmalite, na-enyere ndị cinematographers aka ka ha kee anya ha maka isi foto ma nyekwa akụ a tụkwasịrị obi site na njide ruo n'isi.
Na mgbakwunye na Light Iron's New York na Los Angeles ụlọ ọrụ, nke ọ bụla na-enye ọrụ zuru ezu nke ọrụ ịmecha ihe, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọnọdụ na Atlanta, Albuquerque, Chicago, New Orleans, Toronto na Vancouver na-enye ọrụ dailies na nnọkọ dịpụrụ adịpụ. Ikike Light Iron enweghị ikike na - enweghị atụ - gụnyere ihe ngwọta maka dailies, ịgbazinye ederede na-anọghị n'ịntanetị, na agba na mmecha - mepee ụzọ maka ndị na-ese ihe nkiri na-arụ ọrụ ebe ọ bụla n'ụwa iji soro ụlọ ọrụ ahụ nwee mmekọ.
Hallen kwuru, "Akụkọ ihe mere eme Iron Iron nke ọsụ ụzọ na-ebute faịlụ na-atọ ntọala na mbido maka ikike anyị nwere ịdị anya." “N'ime ọnwa iri na abụọ gara aga, ka ụlọ ọrụ ahụ na-agagharị site na ọrịa ahụ na-efe efe, ihe ngwọta anyị dịpụrụ adịpụ maka dailies, nchịkọta akụkọ na mmecha egosiwo na-agbanwe egwuregwu n'ezie. Kama ịnwe isi na otu ebe, ndị ahịa anyị nwere ike ịhọrọ ịrụ ọrụ n'ọtụtụ ọfịs Light Iron - yana site na ụlọ ọrụ ha na ụlọ ha - n'otu oge. Ebe ọ bụla ndị na-eme fim na-arụ ọrụ, ha na ndị omenkà nwere ike imekọrịta ihe ọ bụla n'ụlọ ọrụ anyị. ”
Ìhè Ígwè, a Panavision ụlọ ọrụ, na-ebe-ghọtara dị ka a na nkà na ụzụ ndú na nka onye na nka na ọgwụgwụ na-ọgwụgwụ mmepụta na post ngwọta. Ndị na-eme ihe nkiri, ụlọ ọrụ ihe nkiri, ndị okike na ndị na-ahụ maka teknụzụ dabere na nka Light Iron iji nyefee usoro ọrụ dijitalụ na-aga n'ihu, site na dailies na njikwa data na agba ikpeazụ na ọrụ nchekwa ụlọ ọrụ mgbasa ozi. Site na ebe mgbazinye na-anọghị n'ịntanetị na akụrụngwa n'ofe North America na-enye ikike dịpụrụ adịpụ na iru ụwa dum, Light Iron bụ ọkachamara na ịbụ onye nwere ọgụgụ isi iji gboo mkpa pụrụ iche nke ihe nkiri eserese na ọrụ episodic. Soro ụlọ ọrụ na Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo, ma ọ bụ LinkedIn.
Previous: SMPTE Hollywood Tackles TikTok na Mgbakọ Ọgbakọ Machị
Osote: AP / Junior Onye Mmepụta